‘ओली सरकारले खडा गरेको फोहोरको डंगुरलाई सफा गर्छौं, हामी पूरा नहुने सपना बाँड्दैनौं’ : डा. प्रकाशशरण महत (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौमा महाधिवेशन हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले क्रियाशिल सदस्यताको विवादबारे पनि आज भोलिभित्रै विवाद हल गरिने विश्वास दिलाए । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,क्रियाशिल सदस्यता विवादको बारेमा हामी बसिराखेका छौँ । म पनि त्यसमा छु । यो क्रियाशिल सदस्यता विवाद अस्ति हामी बसेर धेरै टुग्यायौं । आज पनि बसेका छौं । अब थौरै मात्रै ठाउँहरुमा विवाद बाँकी छ, त्यसमा पनि आज र भोलिसम्म टुँगो लाग्नसक्छ । आज भोलि सम्म क्रियाशील सदस्यता समाधान हुन्छ । प्रस्तुत छ नेता महतसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :